Arcalion (အာကလီယွန်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Arcalion (အာကလီယွန်)
Arcalion (အာကလီယွန်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Arcalion (အာကလီယွန်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Arcalion (အာကလီယွန်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Arcalion ဟာ သိုင်ရာမင်း ခေါ် ဗီတာမင် ဘီ နဲ့ အလားတူ ထုတ်လုပ်ထားတည့် ဆေးတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးကို အောက်ဖော်ပြပါ ရောဂါတွေကို ကုသရာမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
အယ်ဇိုင်းမား ခေါ် အတိတ်မေ့ရောဂါ
ဆီးချိုကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အာရုံကြောဆိုင်ရာ နာကျင်ခြင်း
Multiple sclerosis (MS) ကြောင့်နှုံးချိခြင်း(သို့) ကူးစက်ရောဂါကြောင့် ဖြစ်တဲ့ နှုံးချိခြင်း
မှတ်ဉာဏ်အားနည်းခြင်း နှင့် အခြားသော ရောဂါတွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Arcalion (အာကလီယွန်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဒီဆေးဟာ ဆေးပြားအနေနဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့အတွက် ခံတွင်းကနေသောက်သုံးလို့ရပါတယ်။ အစာရှိရှိ ၊ မရှိရှိ သောက်လို့ရပါတယ်။ ရေ ၁ ခွက်အပြည့်ဖြင့် Arcalion(Sulbutiamine)ကိုမြိုချပါ။
ဆေးပမာဏ လွန်ကဲတာတွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ဆေးပြားတွေကို အမှုန့်ကြိတ်ခြင်း ၊ ချိုးဖဲ့ခြင်း ( သို့ ) ဝါးစားခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။
Arcalion (အာကလီယွန်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Arcalion ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည် မထိုးအောင် နဲ့စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင် သိမ်းဆည်းတဲ့နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေ မဖြစ်အောင်လို့ Arcalionကို ရေချိုးခန်းထဲမှာ သိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေ မပြုလုပ်ပါနှင့်။ Arcalion ဆေးအမျိုးအစားနဲ ့ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှု ပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံ ကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကို အမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေ အကုန်လုံးကို ကလေးတွေ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာ ထားပါ။
Arcalion ကို အိမ်သာထဲပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်ကနေ ဆေးကို ပစ်ချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကို မလိုအပ်တော့တဲ့ အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့ အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ ဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ် ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Arcalion (အာကလီယွန်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များရှိရင် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း (သို့) ကလေးနို့တိုက်ခြင်း
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မရှိပဲ သောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးများ ဥပမာ သဘာဝဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများနဲ့ ဖြည့်စွက်ဆေးဝါးများ အားလုံးပါဝင်ပါတယ်။
Arcalion ၏ ပါဝင်ပစ္စည်းများ (သို့) အခြားသောဆေးဝါး များနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း
အခြားသော ရောဂါများ ရှိခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Arcalion (အာကလီယွန်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ် နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များ မရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ဆေးသောက်ခြင်းကြောင့် သန္ဓေသားတွင် အဆိပ်သင့်ခြင်း (သို့) ပုံစံပျက်ခြင်း တို့ဖြစ်စေကြောင်း ထုတ်ပြန်ထား ခြင်း မရှိသေးပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဆေးသောက်ခြင်းကို ရက်ချိန်းမှန်မှန် ပြရုံနဲ့ဖော်ပြပါ အန္တရာယ်ကို ရှောင်ရှားနိုင်တယ်လို့ မပြောနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ Arcalion ကို သောက်သုံးရန် မသင့်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ ဖော်ပြထားသလိုပဲ မိခင်နို့ရည်ထဲ မှာ ဆေးပျော်ဝင်မှုရှိမရှိဆိုတာကို ထုတ်ပြန်ထားခြင်း မရှိပါ။ Arcalion ကို နို့တိုက်မိခင်များ သောက်သုံးရန် မသင့်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေရင် (သို့) ကလေးနို့တိုက်နေရင် Arcalion ကို မသောက်သုံးခင် သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူနဲ့ အမြဲတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Arcalion (အာကလီယွန်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Arcalion ကြောင့် အောက်ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
မျက်နှာ၊ တံတောင်ဆစ်နှင့် လက်များတွင် အနီကွက်များ ပေါ်လာခြင်း
သွေးတွင်း Uric acid ပမာဏများခြင်း
Epidermolysis (အရေပြားရောဂါ တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးရိုးလိုက်တက်ပြီး တွေ့ရခဲပါတယ်။ အရေပြားမှာ နုနယ်ပြီး အကြမ်းမခံဖြစ် တတ်ပါတယ်။)
မျက်ခွံ နီခြင်း၊ မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်း
ဓါတ်မတည့်ခြင်း (အသက်ရှုခက်ခဲခြင်း၊ ရင်ကျပ်ခြင်း၊ အရေပြားတွင် အနီကွက်များပေါ်ခြင်း (သို့) ရောင်ရမ်းခြင်း။
ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများက လူတိုင်းတွင် မဖြစ်ပါ။ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် အခြားသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့် ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ရှိပါက သင်ရဲ့ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင် ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Arcalion (အာကလီယွန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
သင်အခု လောလောဆယ်ဆယ် သောက်သုံးနေတဲ့ တခြားသောဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါ တယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားပဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင် ပစ္စည်းတွေ အားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေ မပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Arcalion (အာကလီယွန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Arcalion က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးအကျိုးသက်ရောက်မှု ပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင် ဆေးမသောက်မီကတည်းက အစားအသောက် (သို့) အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေ ရှိမရှိကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Arcalion (အာကလီယွန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Arcalion ဟာ သင့်ရဲ့နဂို ကျန်းမာရေး အခြေအနေများနဲ့သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲသွားတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ လတ်တလောဖြစ်နေတဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အထူးအားဖြင့်
Sulbutiamine နှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း
ဂလူးကိုစ့် နှင့် ဂလက်တိုစ့် (ကစီဓါတ်များ) ကိုမစုပ်ယူနိုင်ခြင်း (သို့) အင်ဇိုင်းဖြစ်သော လက်တေ့စ် (lactase) မရှိခြင်း တို့ရှိရင် အသိပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Arcalion (အာကလီယွန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏက ဘယ်လောက်လဲ
နေ့စဉ် ဆေးပြား ၂ပြားမှ ၃ပြားထိ (သို့) ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည့် အတိုင်း သောက်သုံးပါ။
ကုသမှုအချိန်ကာလကတော့ ၄ ပတ်ဖြစ်ပါတယ်။
တိကျသေချာတဲ့ ဆေးအချိုးအစားနဲ့ကုသမှုမှာ လူနာတစ်ဦးစီရဲ့ ရောဂါနဲ့အခြေအနေပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါပဲ ဆေးအတိုးအလျှော့ မပြုလုပ်ရပါ။
ကလေးလူနာများအတွက် သောက်သုံးရမယ့် အချိုးအစားကို သက်သေပြထားခြင်း မရှိပါ။ သင့်ရဲ့ကလေးအတွက် အန္တရာယ် ရှိနိုင်ပါတယ်။ မသုံးစွဲခင်မှာ ဆေးရဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ကောင်းကောင်းနားလည်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆက်လက်သိရှိလိုသော အကြောင်းအရာများကို သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Arcalion (အာကလီယွန်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Arcalion ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံ အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆေးပြားပုံစံ ပြင်းအား ၂၀၀ မီလီဂရမ်
Arcalion ကို သောက်သုံးဖို့လွတ်သွားခဲ့ရင် (မေ့သွားခဲ့ရင်) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သောက်သုံးရမယ့် အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုး မလုပ်ပါနှင့်။
Arcalion® (Sulbutiamine). http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 1285-sulbutiamine.aspx?activeingredientid=1285&activeingredientname=sulbutiamine. Accessed October 05, 2016.
ကလေးများအတွက်ဗီတာမင် ဘီ၏အံ့ဖွယ်အကျိုးကျေးဇူး ၄ ရပ်